Baatii Hagayyaa galiin hidha haaromsaaf walitti qabamee isa waggaa darbee irraa birrii miliyoona 55 n hir’isuun isaa ibsame – ዜና ከምንጩ
Baatii Hagayyaa galiin hidha haaromsaaf walitti qabamee isa waggaa darbee irraa birrii miliyoona 55 n hir’isuun isaa ibsame
Hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddicha Hagayyaa bara 2013 karaa galii walitti qabuu garaa garaatiin galiin walitti qabamee yeroo wal akkaataa bara 2012 waliin wal bira qabamee yammu ilaalamuu birrii miliyoona 55n hir’isuuf isaa ibsame.
Hagayyaa bara 2013tti walii galaan birriin miliyoona 96.7 kan walitti qabamee yammu ta’u yeroo wal fakkaata bareengaddaa waliin wal bira qabamee yammu ilaalamuu birrii miliyoona 55n garaa garummaa qaba jechuudhaan waajjira Mana Maree waltaasiisaa ummattummaa hidha haaromsaati Daarektarri dhimoota komunikeeshinii obbo Hayiluu Abraham Addis maaladaatti himaniiru.
Baatii Hagayyaa bara 2013tti birrii miliyoona 152 kan walitti qabamee yammu ta’u galiin ol’aanaa argamuu kan danda’e Guutiinsi bishaanii isa jalqabaa hordoofeetuu jechuudhaan obbo Hayiluu yaadataniru. Hagayya bara 2013 kan walitti qabamee gurgurtaa boondii biyya keessaa miliyoona 24.5 bitat boondi Diyaaspooraan biyya alaafi kennaa irraa birrii miliyoona 55.7 ergaa gabaabaa 8100dhaan birrii miliyoona 16.2 fii akkasumas humna elektrikii Itiyoophiyaa irraa kuma 109 ta’uun isaa beekameera.
Hawaasichii deeggarsi hidha haaromsaa Itiyoophiyaa guddachaa taasisuu addaan cite hin beekuu kan jedhan Hayiluu yaroodhaa yerootti garuu busichi adda ta’uu mala jedhaniiru. Bara 2012 tti galiin ol’aanaa kan argamee baatii Waxabajjii yammu ta’u yeroo sanatti birrii miliyoona 87.5 argachuu danda’amera. Kanatti ansuudhaan raawwiin guutiinsii bishaanii hidha haroomsaa marsaa jalqabaa umatiicha dadamqsee baatii Adoolessaa xumuraarra birrii miliyoona 120 gahee ture.
Baatii Hagayyaa bara 2013 hir’atee kan mul’atee sababii garaa garaa ta’u isaa kan ibsan Daarektarri quunnamtii ummataa kun guutiinsi bishaanii hidha haaromsaa marsaa lammataa yoo jiraatees haala qabatamaa biyyaatti hordofee hawasichii Raayyaa ittisa biyyaaf pirojaktoota biyyummaa kanneen irratti buusiidhaan hirmaachuu isaanitiini jedhaniiru.
Deggarsii Raayyaa ittisa biyyaaf taasifamu dhimma biyyaa of danda’e waan ta’eef xiyyeeffannaa ummatichaa harkisu danda’eera jechuudhaan ibsaniiru. Bara 2013 baatii Adoolessaa fi Hagayyaa lamaan qofaatti lamiileen Itiyoophiyaa biyya keessatti argaman sababii eeraman buusii xiqqaa kan taasisan yammu ta’u gara caaluu Diyaaspooraan waan biyya alaa buusii guddaa taasisuu isaanii wal qabsiisanii mul’iisaniiru.
Baatilee lamaan eeraman kanneen keessatti walii galaan birriin miliyoona 201.8 walitti qabamuusaa kan ibsan obbo Hayiluun Diyaaspooraan biyya alatti deggarsii birrii miliyoona 122.2 taasifameera jechuudhaan eeraniiru. Kun seenaa waggaa 10 keessatti deggarsii Diyaaspooraan ol ba’e kan mul’atee yammu ta’u haalawwan salphaafii ammayyaa kan uumaman ta’uun isaanii kanaaf sababiidha jedhaniiru.
Kanneen keessaa tokko “on line’’ yammu ta’u warraaqsa ‘’it is my Dam’’(hiidhichi kan kooti jedhuun baankii biyyaalessaa tti humna elektiriika Itiyoophiyaaf akkasumas baankii Zaman dhaabbilee Egil fii Chaappaa jedhaman waliin ta’udhaan Dolaara kuma 338 baatii Adoolessaa fii Hagayyaa qofaatti walitti qabuun danda’ameera.
Deggarsii Diyaaspooraa kun Dhaabbatichi Haalawwan qabeenya walitti qabuu amayyaafii salphaa uumuudhaan deggarsa isaanii akka cimsan Degaru akka qabu agarsiisa tokko ta’u Hayiluu eeraniiru.
Kanatti dabalees deggartootaa biyya keessaa qonnaan bultootaaf horsiisee bultoota kutaa biyyaa jiran bira ga’uudhaan yeroo ammaa ummanni biyyaatti gara caaluu kan jiruu baadiyaa waan ta’eef dadamaqsa ol’aanaa taasisuun ni barbaachisa jedhaniiru. Hawaasicha yeroo ammaa hidha haaromsaaf haarawaa waan hin taanee maallaqa aniis ta’e seexaadhaan Degaru qabna jedhaniiru.
Miidiyaalee garaa garaa ogeyyonni beeksisaa kutaalee hawaasaa sivili xiyyeeffannaa kennanii akka hojjetan karoori qabamuu isaadha Hayiluun Addis Maaladaatti kan himan. Sochii walitti hidhama hidha haaromsaa jedhuun karaa marsariti taasifameen imo dadamaqsa teknolojiidhaan deeggaramee taasiisuuf humna namaa ramaduudhaan sochiiwwan waajiraalee garaa garaa fayyadamuudhaaf jadhameera.
Kanaan dura kan barame namootii miidiyaaf kanneen fayyadamuudhaan hojiin warraaqsa uumuuf deggarssawwan akka itti fufee taasisuun hojjatamaa jiraachuu Hayiluun kaasaniiru.
Hojiin tarbaayinota lama hidha haaromsa yeroo dheeraa fixe guutummaa gidduutti akkasumas hojiin ijaarsa humna tarbaayinoota naannessuun xummurameera. Tarbaayinoonni kun dhiyenyatti gara hojiitti galu jedhamee kan eegamu yemmu ta’u hojiiwwan tarbaayinoota birraa sia’ina ol’aanaadha hojjatamaa jiru jedhaniiru Hayiluun. Guutiinsi bishaanii marsaa lammataa ergii gaggefamnee booda yeroo ammaa bishaanichii dhanga’aa jira.
Total views : 6693740